Wararka - Iibiyaha Madaxa Xafiiska Shiinaha ayaa ku guuleystay Abaalmarinta Naqshadeynta 2022 iF
Guddoomiyaha Xafiiska Ergonomic maqaarka
AMOLA iyo POLY Waxay Helaan 2022 iF Design Awards
Ku guulaystayaasha Abaalmarinta Naqshadeynta 2022 ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay.
Goodtone's AMOLA iyo POLY waxay mar labaad ku guulaysteen aqoonsiga abaal-marinaha naqshadaynta caalamiga ah ee fikradahooda naqshadaynta ee mustaqbalka iyo waayo-aragnimada raaxada ugu dambeysa.
Tan iyo markii la aasaasay Jarmalka 1953, Abaalmarinta Naqshadeynta iF waxaa loo aqoonsaday mid ka mid ah abaal-marinnada naqshadeynta ee ugu saameynta badan adduunka.Xeerbeegtida khubarada aduunka oo dhan ayaa qiimeeya tobanaan kun oo shaqooyin la soo gudbiyay.Abaalmarinno xirfadeed.
Qurux badan oo dhadhan fiican leh ayaa ah waxyaabaha xudunta u ah Amola.Naqshadeeyuhu waxaa dhiiri galiyay suudadka quruxda badan ee dadka caanka ah ee nolol maalmeedkeena.Jidhku wuxuu qaataa tignoolajiyada qaabaynta isku dhafan.Iyada oo loo marayo farsamada gacanta, tolidda saxda ah ee saxda ah ayaa adkeynaysa maqaarka jilicsan ee jilicsan.Saxiixa cad oo fudud ayaa muujinaya qaabka Amola.
Iyada oo la raacayo isbeddelka tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah uga ah oo kale ah oo ku yaala kursiga fadhiga, GOODTONE waxay sii wadaa inay kordhiso kharashkeeda ku aaddan cilmi-baarista iyo horumarinta fikradda .Ugu dambayntii, waxa ay gaadhay heshiis la xidhiidha wada shaqaynta kooxda ugu saraysa ee ITO ee jarmalka kuwaas oo diirada saarayay cilmi baadhista xogta kiiska iyo horumarinta ergonomic ee sanadaha 34, waxaanay bilawday taxanaha AMOLA oo leh bilicda horumarsan iyo hawlo la taaban karo.
Waxaa dhiirigeliyay walxaha joomatari, qaababka saddex-geesoodka ah ee lakabka ah iyo farsamooyinka tolida 3d waxay keenaan muuqaalo badan, oo soo bandhigaya saameyn saddex geesood ah.Isticmaalka midabada ay ka buuxaan firfircoonida waxay jebiyaan jawiga caajiska ah, waxay sameeyaan saameyn muuqaal ah oo xooggan, waxayna ka tagaan qaab gaar ah.
Badeecooyin badan oo suuqa yaala ayaa u muuqda inay soo jiitaan dareenka, laakiin iska indho tiraan nuxurka kursiga, kaas oo ah raaxada fadhiga.Naqshadeeyayaal badan oo diirada saaraya khibrada isticmaalaha iyo cilmi baarista ergonomic, waxaan ugu dambeyntii dooranay Fuseproject kaas oo ku habboon falsafadeena naqshadeynta joogtada ah oo u adeegay adduunka's top furniture Herman Miller. Waxaan rajeyneynaa inaan abuurno kursi xafiis oo leh sifooyin gaar ah annagoo ku hurin dareen fadhi raaxo leh.Kuma koobna muuqaal gaar ah.Ma aha oo kaliya in lagu dhex dari karo muuqaalo xafiisyo dabacsan oo kala duwan, laakiin sidoo kale waxaa lagu dhejin karaa goobta shaqada guriga oo ay noqoto qayb ka mid ah qurxinta guriga.